Nageenya Lixa Oromiyaa: Gidaamiitti namoonni lama ajjeefaman, kaan yaaddoo guddaa himatu - BBC News Afaan Oromoo
Nageenya Lixa Oromiyaa: Gidaamiitti namoonni lama ajjeefaman, kaan yaaddoo guddaa himatu
Image copyright Lammii Beenyaa/Facebook
Goodayyaa suuraa Magaalaa Gidaamii mana jireenyaa Obbo Nagaash Fufaa
Guyyaa kaleessaa [Sambata] galgala keessaa naannoo sa'aatii tokkoo fi walakkaa Godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Gidaamii keessatti namoonni lama rasaasaan ajjeefamuu jiraattonni BBC'tti himan.
"Magaala keessa dhukaasatu ture, kana gidduutti kan isaan ajjeefaman. Qaama ajjeese ammoo adda baafachuu hin dandeenye," jedhan jiraataan magaalatti nageenya isaaniif sodaatanii maqaan isaanii akka hin eeramne gaafatan.
Namoonni ajjeefaman tokko jiraataa magaalaa Gidaamii ganda 01 kan ta'an Obbo Nagaash Fufaa kan jedhaman yoo ta'u kan lammataa "baadiyyaa Qeellam irraa dhufan, eenyummaa isaani hin beekne," jedhu jiraataan kun.
Namoonni ajjeefaman lamaan Nagaash Fufaa fi Yaa'iqoob Tolaa akka jedhaman bulchaan Aanaa Gidaamii Obbo Dassaalenyi Tujubaa BBC'f mirkaneessanii jiru.
"Naannoo mana Obbo Nagash Fufaatti galgala poolisii humna addaa fi raayyaa ittisa biyyaa hojii paatroolii irra turan irratti boombiin dhukaafame, qawweenis itti dhuka'e," jedhu Obbo Dassaalenyi.
Qaamni boombii darbates ta'e dhukaasa bane eenyu akka ta'e hin beeknu, kan irratti darbatamee fi itti dhukaafame garuu qaama mootummaatti jedhan.
Namoonni ajjeefaman rasaasa eenyuun akka du'an wanti beekame hin jiru jedhan.
"Yeroo dhukaasni jiru rasaasni ebelu ebelu jettee hin filattu, kan qaamni mootummaa ofirraa ittisuuf dhukaaseenis ta'uu mala, kan jara jalqaba dhukaasa baneenis ta'uu mala" jedhan.
Koreen waajjira poolisii irraa dhaabbate akka namoonni kun itti ajjeefaman qulqulleessaa jiraachuus himaniiru.
'Uummati gara itti goru dhabe'
Rakkoo nageenyaa naannoo sana jiru irraa kan ka'e namni sodaatee sa'aatii tokko osoo hin guutiin waan manatti galuuf maaltu akka uumame baruu hin dandeenye jedhan jiraataan dubbifne.
Jiraataan magaalaas ta'e baadiyyaa yaaddoo guddaa keessa jira, daldalaan magaalattii keessaa baqataa jira, qotee bulaan ammoo baadiyyaa irraa magaalaatti baqataa jira jedhu.
Ganama reeffi isaanii kan argame Obbo Nagaash daldalaa beekamaa akka ta'aniifi magaalaa Finfinneetti mana ijaarrataa akka turan jiraataan kun BBC'tti himaniiru.
"Mana amantaa keessattis tajaajiladha, nama nagaa siyaasa keessaa qooda tokko hin qabnedha," jedhu.
Aanaan Gidaamii aanaalee Godina Qeellam Wallaggaa loltoonni duraanii Adda Bilisummaa Oromoo waamicha araaraa didanii bosonatti hafan keessa socho'an keessaa tokko.
Wayita ammaa mootummaan humna waraanaa bobbaasee loltoota kana dhabamsiisuuf yaalii gochaa kan jiru yoo ta'u, loltoota mootummaa hojii kanaaf achitti ramadaman irratti komiin yoo ka'u ni dhagaahama.
Gama kaaniin loltoota duraanii ABO bosonatti hafan irrattis komiin ni dhagaa'ama.
Uummatni naannicha nagaa dheeboteera kan jedhan jiraataan BBC'n dubbise kun, "nagaan gidduu qaama hidhate kana lamaaniitti hin bu'u taanaan uummati gara itti goru dhabeera," jedhan.
Wayita ammaa magaalaa Gidaamii keessa kan socho'aa jiru qaama nageenyaati kan jedhan jiraataan kun, "karaa nagaa furuudhaaf hin yaalamu yoo ta'e, haala biraatiin wanti furamu waan jiru hin fakkaatu," jedhan.
Jiraataa magaalaa Gidaamii kan ta'anii fi wayita ammaa sodaa nageenyaaf Finfinneetti baqatanii kan jiran qotee bulaan maqaan isaanii akka hin dhahamne gaafatan biraan "yeroon uummanni keenya cunqursaa guddaa keessa jiru amma," jedhan.
"Meeshaan inni tokko guyyaa ajjeesa, inni kan biraan ammoo halkan ajjeesa, uummatni keenya kana jidduutti dararamaa jira," jedhan.
Godinaaleen lixa Oromiyaa omisha bunaan beekama kan jedhan namni kun "qotee bulaan laga bunaa lixee aramachaa hin jiru, midhaan qotee jiraachuus hin dandeenye," jedhu.
Kanaaf jecha baay'inaan gara magaalaatti godaanaa jira jedhu. "Waan amma harkaa qabu yoo fixate bara itti aanu carraan motummaarraa deeggarsa nyaataa eeguu bal'aadha," jedhan.
Daldalaanis Finfinnee dhufee achi deebi'ee daldaluu waan hin dandeenyeef magaalattii dhiisee baqateera jedhan.
"Namnumti kaleessa ajjeefaman kun mataan isaanii Finfinneetti galuuf mana ijaarrataa turani," jedhu.
Daldalaan liqaa baankiirraa liqeeffatee ittiin hojjetaa ture daldalee deebisuu waan hin dandeenyeef rakkoo dabalataaf saaxilamaa jiraachuus himu.
Namni hojjetaa hin jiru, ijoollees barsiifataa hin jiru egereen keenya dukkana ta'ee nutti mul'ata jedhu jiraataan kun.
"Daabboo gararraa fi gajjallaan ibiddi itti boba'u"
Uummanni aanaalee godina Qeellam Wallaggaa fi lixa Wallaggaa hedduun rakkoo guddaa keessa jiru, garuu ammoo rakkoo isaaniillee gadi bahanii dubbatachuu hin dandeenye jedhu jiraataan kun.
"Qaama tokkotti iyyachuu hin dandeenye, qaama lamaan jiru keessaa inni tokko barcuma qaba, inni tokko barcuma hin qabu, inni barcuma qabus ni ajjeesa, inni barcuma hin qabnes ajjeesaa jira sababa ta'eef qaama itti iyyannu wallaallee jirra," jedhan.
"Yoo namni tokko mootummaatti siqee dubbate, warra bosona jirantu irratti tarkaanfii fudhata, yoo warra ABO'n bakka bu'a jedhutti siqee dubbate mootummaatu tarkaanfii irratti fudhata."
"Uummati kana keessatti abjuu keessa jira, waan qabatu dhabee akka nama bishaan nyaatee ta'ee jira," jedhu jiraataan kun.
"Kana gidduutti namni carraa hidhamuullee hin argatu, harka saddeettama carraa ajjeefamuutu isa eeggata," jedhan.
"Inni guyyaa dhaqus manaa gadi fuudhee ajjeessaa, inni halkan dhaqus manaa gadi fuudhee ajjeesa. Uummanni daabboo gararraa fi gajjallaan ibiddi itti boba'u ta'e, karaa lachu gubate jechuudha," jedhu.
Warroota kana lamaan humni ittisu ykn dhiibbaa irratti godhu addunyaan yoo jiraate malee bakka qaamni lamaan jiranitti uummanni gadi bahee rakkina isaa dubbatachuu hin danda'u jedhu.
Mootummaan addunyaa ykn qaamni biraa yoo furmaata nuu barbaade malee "warra kana lamaan irraa furmaata arganna abdii jedhu hin qabnu" jedhu.
Ofii isaanii maatii miseensa sagal qabu akka bulchan kan himan namni kun, hojii qonnaa isaanii dhiisanii Finfinneetti baqatani.
"Bara dhufu mootummaan deeggarsa nyaataa nutti fe'uun isaa waan oolu miti" jedhan.
"Duraanis jijjiiramni amma dhufe kun akka dhugoomu takka qe'eerraa baqataa, takka deebi'aa jiraachaa turre, erga jijjiiramichi dhufee booda hafuura baafanne gaafa jennu ammoo ittuu itti caale" jedhu jiraataan kun.
"Keessuma erga mootummaan aanga'oota aanaalee Godina Qeellam Wallaggaa fi Wallagga Lixaa duraan turan hojiirraa ari'ee, namoota bakka adda addaa irraa coree ramadeen booda duutis, godaansis uummata keenyatti hammaate," jedhu.
'Rakkoo nageenyaa ture carraatti jijjireen qabxii ol-aanaa fide'
Bulchaan aanaa Gidaamii Obbo Dassaalenyi Tujubaa rakkoo jiraattonni himatan hin haalle. Erga ji'oota jaha as garuu jijjiiramni jira jedhu.
"Uummata mariisifnee, waliin dubbannee haa xinnatus guddatus jijjiiramni jira. Nagaa fi tasgabbiin fooyya'eera, dhibbaa dhibbatti furameera jechuun hin danda'amu" jedhu.
Haa ta'u malee qaamni nageenyaa uummatarraan rakkoo gahaa jira kan jedhu sirrii miti jedhu. "Eenyu nageenya jeeqaa akka jiru ifatti beekamadha" jedhan.
"Qaamni nageenyaa uummata tiksa malee uummata hin miidhu. Namni dhaaba fedhe deeggaruu, karaa nagaa siyaasa isaas gaggeeffachuu ni danda'a," jedhu.
"Hidhatanii socho'uun garuu seeraanis eeyyamamaa miti" jedhan.
Mootummaan Naannoo Oromiyaa bara 2012 eegalame kana keessa guutummaatti hidhattoota naannoo Oromiyaa keessa socho'an nan dhabamsiisa jedhee ibsa kennuun isaa ni yaadatama.
Komaand Poostiin Kantiibaa magaalaa Naqamtee dabalatee hoggantoota torba to'ate
Barataa Qeellam Wallaggaa: 'Rakkoo nageenyaa ture carrattan jijjireen qabxii ol-aanaa fide'